Iingcebiso ngezohambo zase-US ziintloni zamanye amazwe: Inethiwekhi yeHlabathi yezoKhenketho
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba zeManyano » Iingcebiso ngezohambo zase-US ziintloni zamanye amazwe: Inethiwekhi yeHlabathi yezoKhenketho
Iindaba zeManyano • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • ulwaphulo-mthetho • Iindaba zikaRhulumente • iindaba • abantu • Cinezela iZaziso • Xanduva • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • komzila Ngoku
I-COVID-19 ilitshintshile ihlabathi. Oku kufanele ukuba kubalwe nendlela izilumkiso zohambo ezikhutshwa ngayo. I-United States kufuneka ibe kuphela kwelizwe kwihlabathi eliqhwaba imimandla yalo NGENGAHAMBI ngezilumkiso. I-US kufuneka ibe kuphela kwelizwe kwihlabathi elibandakanya abamelwane abanobuhlobo ukuya kwelona nqanaba liphezulu kuluhlu "lokungahambi". Inethiwekhi yoKhenketho yeHlabathi eseHawaii esekwe eHawaii ikhuphe ingxelo ibongoza i-United States ukuba iphinde isebenzise indlela ezinikwa ngayo izilumkiso zohambo.
Izilumkiso ngohambo zikhutshwa ngoorhulumente ukukhusela abemi babo kulwaphulo-mthetho, ekubulaweni nasezimfazweni.
Isebe likaRhulumente wase-US likhupha izilumkiso zokuhamba kubemi base-US, kwaye ezi zilumkiso zichaphazela abahambi ngabanye, ukuhamba kweqela, ukuhamba ngeenqanawa kunye neendibano.
Ukuhamba ngokuchasene nesilumkiso sokuhamba kunokuba, kwiarhente yokuhamba, ukuhamba ngenqanawa, okanye umcwangcisi weentlanganiso, iziphumo ezibi zoqoqosho okanye zomthetho.
The Inethiwekhi yoKhenketho yeHlabathi (WTN) namhlanje ikhuphe ingxelo yokuma ukukhuthaza iSebe likaRhulumente wase-US kunye neZiko laseMelika lokuLawula nokuThintela izifo (i-CDC) ukuba liqwalasele ukutshintsha indlela iingcebiso zokuhamba kubemi base-US abahamba "kumazwe angaphandle" okwangoku zipapashwa kwaye zaziswa.
"I-COVID-19 itshintshe yonke into," Usihlalo weWTN uJuergen Steinmetz utshilo. “Akukholeleki xa ilizwe elifana neBahamas okanye iGrisi lidweliswe kudidi olunye neAfghanistan okanye iNorth Korea. Oku kuyandiphoxa kwaye kuphantse kuhleke. ”
I-WTN ingathanda ukubona amanqanaba ama-3 azimeleyo kwilizwe ngalinye kudweliswe kuluhlu lweengcebiso zokuhamba liSebe likaRhulumente wase-US okanye iCDC.
1. Ukulinganisa ngokusekwe kukhuseleko nakwimiba enxulumene ne-COVID.
2. Ukulinganisela ngokusekwe kwi-COVID abahambi abangagonywanga.
3. Ukulinganisela ngokusekwe kubahambi abagonyelwe i-COVID.
Uthungelwano lweHlabathi lezoKhenketho lubongoza ukuba kucinywe iGuam, iPuerto Rico, kunye neeVirgin Islands zase-US kuluhlu “lwangaphandle.”
IGuam, iPuerto Rico, kunye neeVirgin Islands zase-US yimimandla yase-US hayi amazwe aphesheya. Abantu abahlala apho ngabemi baseMelika. Kuya kufuneka baphathwe njengalo naliphi na ilizwe lase-US. Ukuba urhulumente wase-US ahlele ummandla wase-US nge-Level 4 yesilumkiso sokuhamba kuhlazisa, ”wongeze watsho uSteinmetz. "Ndilufumanisa olu calucalulo lungabonakalisi ntlonipho kumalungu eenkonzo zethu aseMelika ahlala eGuam."
Inkqubo yeSebe likaRhulumente wase-US iyawamkela amanqanaba ama-4 okucebisa ngohambo:
Zilolonge ngendlela eqhelekileyo
Isebe laseMelika laseMelika likhuphe elona nqanaba liphezulu leeNgcebiso ngezoKhenketho ngokuchasene nala mazwe alandelayo, lisithi kubemi base-US: SUKUHAMBA kumazwe adwelisiweyo:
Indies zaseNtshona zaseFrance
I-Israel West Bank kunye neGaza
IZiko laseMelika loLawulo lweZifo likhuphe esona silumkiso siphezulu malunga nala mazwe "angaphandle", lisithi:
Kuphephe ukuhamba kwezi ndawo. Ukuba kufuneka uye kwezi ndawo, qiniseka ukuba ugonyiwe ngokupheleleyo ngaphambi kokuhamba.
Iriphabliki yaseKhongo Ekhululekile
IJersey (inxalenye yase-UK)
EPuerto Rico (eMelika)
Izilumkiso zohambo zikhutshwa zisuka kweyona iqhelekileyo - 1 kuye kweyona inzima - 4. Inqanaba elingu-4 lithetha ingozi ephezulu, "ungahambi." Okwangoku, iSebe likaRhulumente alihlukanisi phakathi kwemicimbi yezempilo kunye nemicimbi yemfazwe nokhuseleko.
Ihlala isebenzisa indlela ebanzi yestroke, ipeyinta amazwe onke ngokulinganiswa okufanayo, ke oko, kubangela izigqibo zobuxoki
Iingcebiso zeSebe likaRhulumente ngoku zipeyinta indawo efana neAfghanistan okanye iNorth Korea ngesilumkiso esifanayo esisebenza kumazwe kubandakanya iBahamas okanye iJamaica. Uqoqosho lweBahamas kunye Jameyikha zixhomekeke kakhulu kubakhenkethi baseMelika.
Ukongeza, iNethiwekhi yezoKhenketho yeHlabathi ifumana iingcebiso zohambo zase-US ezikhoyo ezikhutshwe ngokuchasene ne- Intsimi yaseU.S iyamangalisa, iyacalula, kwaye iyalahlekisa. "Isebe likaRhulumente waseMelika kunye neCDC abanalo igunya lokucebisa malunga nokuhamba okanye bakhuphe iingcebiso ngokuchasene nomnye ummandla waseMelika okanye ilizwe," utshilo UMary Rhodes, uMongameli we-Guam Hotel & Association Association.
I-COVID ifuna indlela entsha, kwaye kufuneka kubekho izilumkiso zokuhamba ezisekwe kulwaphulo-mthetho nakukhuseleko, kunye neseti yesibini yezilumkiso ze-COVID. Ezi zilumkiso zamva nje kufuneka zahlule abagonywe kwabangagonyelwanga kwaye ziqwalasele ubukho bovavanyo olukhawulezileyo kunye neemvavanyo zolawulo lweerological ekungeneni nasekuphumeni kwelizwe.
Ukukhutshwa ngokubanzi kweengcebiso zokuhamba kukhokelela kungekuphela kwisiphithiphithi kwezoqoqosho kodwa kukuhla kwezilumkiso zohambo, ucalucalulo kunye neengxaki zopolitiko.
I-WTN ibongoza iSebe likaRhulumente wase-US kunye namaZiko oLawulo lweZifo noThintelo ukuba baphuhlise indlela engacacanga kwaye basebenze ukudala ukuzimisela okuphucukileyo kweengcebiso zokuhamba.
Ingxelo ye-WTN Position isayinwe nguMongameli we-WTN uGqirha Peter Tarlow.
U-Effie Fletcher uthi:
NgoSeptemba 9, 2021 kwi-05: 17
Ndivuma ngokuqinisekileyo kwaye ndiyabulela!